Maxaa loola jeedaa in lagu maalgeliyo Baabuur | ma mudan tahay | Tusaha Khubarada
Bogga ugu weyn Maxay Ka Dhigan Tahay Dhaqaale Gaadhi | Ma mudan tahay | Tusaha Khubarada
Markaad qaadanayso amaahda baabuurka, jadwalka qorshe dib -u -bixinta, oo lagu daray dulsaar iyo kharash kasta, muddo cayiman gudaheed, waxaa lagu magacaabaa maalgelinta Baabuurka.
Waxaa jira habab kala duwan oo ku lug leh maalgelinta baabuurka. Marka, haddii aadan weli iibsan baabuurkaagii ugu horreeyay, barashada aasaaska maalgelinta baabuurka ayaa kaa caawin karta dardargelinta hawsha.
Maaliyadda baabuurka sida ku cad wikipedia.org waxaa loola jeedaa badeecadaha maaliyadeed ee kala duwan oo u oggolaanaya qof inuu helo baabuur, oo ay ku jiraan amaahda baabuurka iyo kiraynta.
Xogta khabiirka laga bilaabo Q1 2019 waxay muujineysaa, oo ka mid ah baabuurta la isticmaalo ee waddada, 85.4% lagu maalgeliyo amaah ama heshiis ijaareed. Marna ma aha fikrad xun in la maalgeliyo baabuur.
Waxaad rabtaa inaad maalgeliso baabuur laakiin ma garanaysid sida loo bilaabo? Akhri si aad u barato hab-tallaabo-tallaabo iyo weliba inta aad u baahan tahay lacag-bixinta hore.
Waa maxay sababta aan u maalgelinayo Baabuur?
Macaamiisha khasab ma aha inay haystaan ​​lacag aad u badan oo ay ku gadanayaan baabuur cusub. sidaas darteed, waxay ka dalbadaan deyn bangiga ama hay'ad maaliyadeed si ay u iibsadaan gaariga. Iyada oo ku saleysan dakhligaaga iyo taariikhda amaahdaada, bangigu wuxuu dejiyaa dulsaarka dulsaarka si lacag -bixinnada billaha ah loo sameeyo labada sano ee soo socota.
Wakhtiga dib u bixinta daynta waa adiga. Waxaad dooran kartaa saddex sano laakiin hubi inaad ku bixiso waqtigii loogu talagalay. Waxaa laga yaabaa inaad go'aansato inaad hore u bixiso laakiin waydii hay'addaada maaliyadeed haddii ay jirto lacag ganaax dib u bixinta.
Ilaa aad deynta iska bixiso, baabuurka waxaa iska leh bangiga. Haddii aad go'aansato inaad iibiso gaariga inta aad maalgelinayso, waa inaad hubisaa in dheelitirka waxa lagugu leeyahay lagu daboolay kharashka gaariga.
Kharashka baabuurku wuxuu daboolayaa waxyaabaha soo socda:
Dayactirka & dayactirka (isbeddelka saliidda, dhaqidda baabuurka)
Kharashyo lama filaan ah (taayir fidsan, tigidhada baarkinka)
Lacagta diiwaangelinta DMV
Aasaaska Maalgelinta Baabuurka
Haddii aad ka fiirsato maalgelinta baabuurka, waa inaad maanka ku haysaa in qiimaha baabuurku ka badan yahay bixinta bil kasta. Waxaa jira kharashyo kale oo dheeraad ah oo la socda helitaanka baabuur oo aadan waligaa ogeyn.
Markaad maalgelinayso baabuur deyn leh, waa inaad tixgelisaa waxyaabaha soo socda:
Qadarka amaahda: Tani waa wadarta lacagta aad deynsanayso si aad u hesho baabuurka
Heerka boqolleyda sanadlaha ah (APR): Kani waa dulsaarka aad ku bixiso deyntaada iyo muddada deynta
Inta ay tahay inaad dib u bixiso qadarka deynta
Maalgelinta baabuur leh heshiis kiro
Kiraynta baabuurku waa nooc kale oo maalgelinta baabuurka oo dad badani aanay garanayn. Markaad kiraysato, waxaad bixinaysaa qayb ka mid ah kharashka gaadhiga.
Gobollada badankood, waxaa laga yaabaa inaadan bixin lacag -bixin hore, canshuurta iibka waxaa laga qaadaa oo keliya lacag -bixintaada bil kasta waxaadna bixisaa qiime maaliyadeed oo la yiraahdo factor money oo la mid ah heerka dulsaarka deynta.
Markaad kiraysato baabuur, guud ahaan waxaad samaysaa lacag bille ah oo ka yar intii aad iibsatay isla baabuur, laakiin kuma lihid gaadhiga oo hadhow u beddeli kara qiime ganacsi ama dib-u-iibin Waxaa laga yaabaa inaad haysato ikhtiyaarka aad ku iibsan karto gaadhiga dhammaadka muddada heshiiska kirada. Si kastaba ha ahaatee, tani guud ahaan way ka kharash badan tahay haddii aad marka hore iibsatay gaariga.
Dhamaadka muddada heshiiska kirada, haddii aad xiisaynayso inaad baabuurka sii haysato, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad ku iibsato gaadhigaaga iibsasho kiro.
Intee in le'eg ayaad u leedahay Lacag -bixintaada Hooseysa?
Markaad maalgeliso baabuur, waxaad u baahan doontaa inaad hoos u dhigto ugu yaraan boqolkiiba 10 lacag caddaan ah oo ah bixinta iibka gaadhiga. Markay sare u kacdo xaddiga lacag -bixintaada, ayay hoos u dhigaysaa qorshaha dib -u -bixinta bil kasta. Sidoo kale waxay khuseysaa haddii a baabuur cusub ama la isticmaalay.
Arrin kale oo muhiim ah in la xuso waa canshuurta iyo shatiga. Haddii aadan tan bixin, waxaad ku dari kartaa lacagahaaga billaha ah.
Habka Talaabo-Talaabo Loogu Maalgelinaayo Baabuurka
Waa kuwan tallaabooyin kala duwan oo la qaado marka la maalgelinayo baabuurka:
Marka hore, baro dhammaan shuruudaha amaahda ee ay u badan tahay in la isticmaalo markaad raadineyso inaad maalgeliso baabuur.
Ogow dhibcaha dhibcahaagu waa iyo sababta aad ugu baahan tahay markaad maalgelinayso baabuur.
Raadi ikhtiyaar maaliyadeed oo wanaagsan oo doorbidaya midka ku habboon miisaaniyaddaada.
Isbarbar dhig deyntaada baabuurka ee horay loo ansixiyay iyo dalab ka yimid ganacsade baabuur.
Saxiix heshiiska amaahda oo xidh heshiiska.
Ogow waxa dhacaya kadib markaad dhammayso heshiiska.
Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Maalgelinta Baabuurka
Maalgelinta baabuur waxay saamayn togan ku yeelan kartaa noloshaada si kastaba ha ahaatee haddii si xun loo maareeyo, waxay kuu keeni kartaa culays dhaqaale iyo shucuureed. Markaa ka hor intaadan ka fikirin maalgelinta baabuurka, waqti u qaado inaad barato faa'iidooyinka iyo khasaaraha kala duwan.
Maalgelinta baabuurka ayaa ku siineysa inaad si dhaqso leh ku hesho gaari
Ka faa'iidayso tartanka suuqa
Waa hab lagu dhisayo astaantaada amaahda, adiga oo u malaynaya inaad dhammaan dib -u -bixinta waqti ku samayso.
Qasaarooyinka qaadashada daynta baabuurka
Dulsaarka iyo khidmadaha: Haddii aad seegto dib -u -bixinta, ama aad bixiso deyntaada kahor jadwalka, waxaa laga yaabaa in lagugu soo dallaco khidmado ciqaab ah.
Khatarta ka -noqoshada
Maalgelinta baabuurtu waa ikhtiyaar weyn oo la sameeyo haddii aad si taxaddar leh u baratid nidaamka. Maalmahan, waxaa jira daraasiin barnaamijyada iibsiga baabuurka taasi waxay ku xirmi kartaa dhowr boqol oo badeecooyin amaah baabuur oo kala duwan, markaa haddii aad jidkaas aadid waxaad yeelan doontaa xulashooyin badan.
Dib -u -eegista Deyn -qaadaha: Is -amaahiyaha Is -amaahiyaa ma Sharci yahay ama Fadeexad kale oo Dhismaha Deynta ah
Nuqul tusaalooyinka Liisaska Kharashaadka Bishii oo hubso inaad wax badan keydsato
Maalgashiga $ 100 samee $ 1000 maalintii | 21 Maalgashi oo sugan 2022
Waa maxay Amaahda Jumbo? Dulmar Iyo Sida Ay U Shaqeyso
Haddii aad rajaynayso inaad iibsato guri ku yaal xaafad la jecel yahay, waxay u badan tahay inaad ogaato in…